Makore gumi adarika mudzimai wangu Marie uye mwanakomana wedu Joel akafa | Apg29
Asi ari dombo repaguva inoti akafa December 22, 2008. The guva iri Jönköping panguva musango Cemetery. Muguva pane coffins maviri chena. A bhokisi guru, uye bhokisi duku kuti umire pamusoro huru.
Kana zviitiko izvi, zvandanyora mubhuku wakarebesa usiku. Zviri kubvongodzwa uye kunoshamisa chaizvo uye kusuruvara bhuku, asi rinoratidza tariro yakajeka muna Jesu Kristu. achiri Unogona kuwana bhuku kana uchida kuigadzira. Tinorasikirwa 150 SEK. Zviri zvakachipa saka ini mari chinhu. The bhuku rinopa nyaradzo uye kurudziro uye pfungwa tariro muna Jesu Kristu. Uyewo shasha evangelisationsbok. Chizvitengera kana ndizvipe mumwe sechipo.
Bhuku rinonzi The chakarebesa usiku nokuti wakarebesa usiku kwegore uye wakarebesa usiku hwangu.
Kubva mubhuku rinonzi The chakarebesa Night
Ndakagara pamubhedha wedu uye akashanda ari Blog yangu nzvimbo. Zvakanga hafu apfuura gumi usiku. Pamberi pangu ndaisa Laptop dzangu duku yemapuranga tafura kuti aigona richaparara. Pedyo neni akanga mudzimai wangu anodiwa naye guru dumbu uye kuverenga mupepanhau. Mukamuri pedyo yedu yokurara aiva Dessan uye tairara pamubhedha wake. Zvose rikanyarara, zvose zvakanga norunyararo, uye zvose zvakanga zvakanaka kwazvo. Sezvazvakanyorwa vakasvika Krisimasi ndakashanda Krisimasi neGore Idzva kukwaziswa mumitauro yakawanda sezvo ndaida muna Blog yangu. Kana ndakanga ndichishanda pane angu mazita Marie wakapetwa pepanhau ake uye akati:
"Ini kukwira pamubhedha."
Marie ngonono zvino akanga doro nepamuviri, ngonono wake kuipa. Kuti varege ini kuvhiringidza aida kuenda kunorara mune imwe kamuri. Mutemo agadzira ari makuru Hal chechetere uye apfeka ari pamubhedha kurutivi dhesiki. Asi nokuda kwechikonzero handina kufunga Marie aizoenda kurara nenzira yakasiyana kamuri usiku huno.
"Ko iwe kugara?" Ndakamubvunza. Asi wakaramba achisimbisa kuti aida kurara horo.
"Hoo," Ini ndikati, "asi kana ukaenda kuchimbuzi unogona kuuya kwandiri kuti handirevi kugara kwenguva refu aine kombiyuta '' Hongu, Ndichaita kuti," iye akadaro, akasiya nenzvimbo uye akapfiga mukova.
Ndakaramba kunyora kwangu ndandanda Krisimasi neGore Idzva buri kwokubatana kuti ndakafunga kubudisa. Ini handina kupiwa kuti manheru ichi rugare nechinguvana kuti kushandurwa zvachose apo musuo mubhedhuru pakarepo akasvinudzwa, asati gumi o'clock usiku, uye Marie akapinda. Kana Ndakatarisa kubva pakombiyuta uye akaona Marie, ndakafunga o zvakanaka, yakanga nguva yekupedza.
Rakanga mhedziso okupedzisira chinhu iye akati. Akati zita rangu ane inzwi rudo chaizvo, nenzira zvinyoronyoro uye yakanaka nzira. Uye sezvo iye crouching zvishoma. I zvose ndakaona uye aiziva kuti akanga ari kurwadziwa.
"Ko zvino inguva yokuti BB?" Ndakabvunza, pandakanga ndichiri vasara pamwe tablet pamusoro duku yemapuranga tafura.
Akati chinhu anenge inaudible kwandiri kuti ndaisagona decipher uye crouching zvakatonyanya, akatsivama mberi kurwadziwa. Ini akasimuka nokukurumidza, akaenda kwaari kundomutora nekuti iye aizorega kuwira pasi. Andakararama naye mujinga miviri pamubhedha uye vakamuradzika zvinyoronyoro pasi parutivi, ndichiri mumusoro mangu vakatanga kutsvaka foni kuna BB.
Sezvo ndakamira ipapo mujinga pamubhedha, pamberi pamubhedha mwana kuti ini Dessan akaisa kuitira saka yakanaka uye akaita Marie nhema mhiri mubhedha wedu, ndakakwanisa kuona kuti chero nhamba dzorunhare mundangariro dzangu masekondi zhinji kudaro kusvikira Marie pakarepo akatanga rira zvakasimba ane bhowa gurgling uye inotubuka ruzha. Handina here kuti ndinoda kuita, asi nomuzvarirwo ndakafunga zvakanga zvakanaka kuisa kumutakura panhovo. Ini Akakotama mberi, ndokumubata akaisa kusimuka. Akabva slid pasi kubva rutsoka pamubhedha pasi pandakanga ndichiri Achimushandisa mumaoko angu.
Handina kuzvinzwisisa zvino, asi apo Marie akafa pachipfuva changu. Chokupedzisira chinhu akati raiva zita rangu, sezvo iye akafa pachipfuva changu.
Pausiku December 22, usiku zvikuru rima maawa muna 2008, chirwere Christer Åberg chakarebesa usiku hwake, paakanga ari wakapona chaizvo uye zvisingatarisirwi anorasikirwa hafu mhuri yake.
A nyaya yechokwadi pamusoro sanzwisisika nezvinhu uye kuhwina zvose.
Vanhu vazhinji vakanzwa uye vakapupurira sei zvakasimba kunetseka vave pavanoverenga bhuku, wakarebesa usiku. Mumwe munhu akanyora kwandiri:
"Chokwadi bhuku zvakanaka iwe vanyora. Pandakatanga kuriverenga ndaisakwanisa kurega. Ndakanga saka mwoyo."
The chakarebesa usiku
Pausiku December 22, usiku zvikuru rima maawa muna 2008, chirwere Christer Åberg chakarebesa uye rima usiku yake upenyu, kana akanga ari wakapona chaizvo uye zvisingatarisirwi anorasikirwa hafu mhuri yake.
Tinotevera kutenda mumwe murume asingazununguki, uye kutenda kwake uye kuvimba naMwari uye nehanya kana zvisingafungidziriki chinoitika uye pakarepo nyika yake paradzanisa.
Bhuku iri zvakare pamusoro Christer Åberg Kutsvaka Mwari, chido chake rudo upenyu-refu uye kurota kwake zuva rimwe pakupedzisira kudiwa zvechokwadi uye mukakumbira rinopisa haazvibatanidzi rudo nyaya.
NYAYA dandemutande KUBVA wakarebesa USIKU
kokutanga kwakanga chakashata. Ndaigara guru kuvhunduka uye vasingazivi zvokuita zvinhu, handina kuziva kuti ndingadai kukurira mwanasikana wangu chete ndikachema uye akadanidzira uye akashevedzera ...
Ini ndaita chaizvo mupristi akanga zano kwandiri kana ndakabvunzwa chii Ndaiti Dessan:
"Ndiudze chaizvo sezvazviri. Haugoni kudzivirira vana kubva chokwadi."
Saka Ndakaudza Dessan kuti naamai wafa, kuti akanga ari kudenga Jesu uye ndaisazodzokazve kumba zvakare. Kana mwana kukireshi Papera akamubvunza apo amai rakanga, akapindura kuti:
"Iye ndiye akafa uye naJesu kudenga."
Asi ikozvino chete vakadanidzira uye akachema. Akanga dzisinganyaradziki uye ndakanga ndisingazivi kuti ndaizoitei ndisingafari. Ini akapinda pamwe Dessan mukamuri mumaoko angu. Akachema uye akavata chake pamusoro pamafudzi changu.
"Ko ini nziyo chinhu kwamuri?" Ndakamubvunza.
"Hongu," akapindura ane anosiririsa mwana inzwi.
Ndaiziva Dessan aifarira kuimba zvakanaka Alleluia imi mandiri. Iye rinoshandiswa nguva dzose dai kana ndakamubvunza kana ndaigona nziyo chinhu. Akadana pasina Alleluia imi mandiri, asi iye nguva dzose akati: "imi." Paakangowana vaiwanzoti "kukurumbidzai" Ndaiziva pakarepo chii rwiyo iye zvaireva. Ndakazviwana pamusoro rwiyo. It wakanyatsokodzera zvose vakuru nevana.
Chii Ndinofanira nziyo? "Ndakabvunza Dessan, nechokwadi kuti iye aida ini kuimba chaizvo rwiyo.
Asi ndakashamisika, akati Dessan vachishevedzera rakapera:
The dandemutande? Itsy Bitsy Spider? "Hahuna kunyange rwiyo muKristu. Asi Ndakaimba kuti mwanasikana wangu, pandaiva naye maoko angu Ivar mufurati guru.
Down akasvika mvura
akageza dandemutande kunze.
Up akauya zuva
nzizi dzose mvura.
Izvi zvakanga chaizvo mharidzo kwandiri. Kana Ndaiimba rwiyo saka aisiya chiitiko pamwe dandemutande mupfungwa dzangu. Ndakaona kuti aitotamburirawo kwakuka neshinda. Asi pakarepo njodzi. The mvura akauya shambidza dandemutande. Asi ipapo kwakauya chishamiso - chishamiso! Zuva akasimuka nokuoma ose mvura saka dandemutande akashinga, uye aigona kutanga kukwira zvakare.
Saizvozvowo, Dessan uye ini aitambura kubva njodzi, asi zuva, Jesu anomuka uye kunotipa ushingi itsva, kuitira kuti pamwe itsva inhare zvakare kukwira shure kumusoro.
Mushure vaimba rwiyo urwu akadanidzira Dessan hatichamuzivi.
- Check mutengo!
150 SEK / mumwe
3 mabhuku: 300 SEK
CHERECHEDZA: Nyora kero yako!
Bhuku akatora mwedzi gumi kunyora, asi zviri nyore chaizvo kuverenga uye zvakakodzera vaduku vechikuru, uye uyewo chipo kana evangelisationsbok !
Christer Åberg vanogara Meadow, pedyo Nässjö pamwe mwanasikana wake chido. Kwemakore akawanda ave kumhanya rimwe remasangano private Blog sitewww.apg29.nu . Iyewo anoita muvhangeri uye zvinobatanidzwa nokuimba, mumhanzi uye kuparidza pamisangano akapoteredza nyika.
Bhuku iri rakabudiswa musi Semnos vaparidzi.
Anotora pamusoro wakarebesa usiku
Ndinonzwa mupfungwa zvakanaka nhasi, asi zviitiko wakarebesa usiku nguva dzose kuuya neni. Asi sezvo neniwo akanyora mubhuku: Pasina Jesu, ndaisambofunga akariita.
Vecka 26, onsdag 26 juni 2019 kl. 00:23